♪ အင်တာနက် မရှိဘဲ Facebook ပေါ် ပို့စ်တင်မယ် ♫
Tuesday, May 31, 2016 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Android နဲ့ iOS တို့အတွက် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Facebook Mobile Apps များမှာပီစီများမှာတောင် မရတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များပါပါတယ်။အချို့စွမ်းဆောင်ချက်များဟာထူးခြားပြီးအင်တာနက် မရှိဘဲနဲ့တောင် Facebook ပေါ် ပို့စ်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ Link များကိုသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပို့စ်အသစ်များကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တင်ထားပြီးသားပို့စ်များကို Edit လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Tutorial မှာတော့ အဲဒီနည်းလမ်းများအသုံးပြုနည်းကိုရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) အင်တာနက် မရှိဘဲပို့စ်တင်နည်း
သင့်မှာဖုန်းဘေလ်ကုန်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်တာနက် မရှိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ် ပို့စ်တင်ချင်ရင် နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ Facebook App မှ Status Button ကို နှိပ်ပါ။ ရေးချင်တဲ့ စာသားများရေးပါ။ ဓါတ်ပုံများကိုလည်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Post Button ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ပို့စ်ကိုသိမ်းပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီးအင်တာနက် ရတာနဲ့ အလိုလိုတင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Android Device များမှာ Offline ဖြစ်နေရင်တောင် ပို့စ်များကို Like လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Online ဖြစ်ချိန်မှာ Like များကိုအလိုလိုလုပ်ပေးမှာပါ။
(၂)ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သတင်း၊ Links များကိုသိမ်းဆည်းနည်း
Facebook မှာဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ၊ သတင်း၊ Links များကိုသ်ိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်နှစ်သက်တဲ့ ပို့စ်များကိုသိမ်းထားနိုင်တာပါ။ ပို့စ်တစ်ခုရဲ့ ညာဘက်မှ အောက်စိုက်နေတဲ့ မျှားကို နှိပ်ပါ။ Save link ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ သိမ်းထားတဲ့ပို့စ်များကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုချင်ရင် ညာဘက်အပေါ်ထိပ်မှ Menu ကို နှိပ်ပါ။ Saved ထဲသွားပါ။
သင် Facebook App ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သင်ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ ပို့စ်များ၊ See First လုပ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ Pages များမှ ပို့စ်များကို ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားမကြာသေးခင်ကတင်ထားတဲ့ ပို့စ်များကိုဖတ်ချင်ရင်တော့ Menu ထဲသွားပါ။ Most Recent ကို နှိပ်ပေးပါ။
(၄) ပို့စ်များကို Edit လုပ်ပါ။
သင် ပို့စ်တစ်ခုကိုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာစာသားများကို ပြန်ပြင်နိုင်အောင်လည်း Facebook က ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Timeline ထဲသွားပါ။ Edit လုပ်ချင်တဲ့ ပို့စ်ကိုရှာပါ။ ပို့စ်ရဲ့ ညာဘက်မှ အောက်စိုက်နေတဲ့ မျှားကို နှိပ်ပါ။ Edit Post ကို နှိပ်ပါ။ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။ Save နှိပ်ပါ။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာကသင့် သူငယ်ချင်းများကသင်ပို့စ်တင်တဲ့ အချိန်ဘေးနားမှ Edited Link ကို နှိပ်မှသာ ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: Facebookဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ
Posted by dawallay lay at 7:07:00 AM
facebook - yarzartuntun5 0894117554ထိုင်းဖုန်း0827193233
0894117554 - thai phone
PageMaker မှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အကြောင်းနှင့် စာများစတ...
CyberLink PowerDVD Ultra 16.0.1510.60​ Full Versio...
ဖုန်းမှ ကွန်ပျူတာ <==> ကွန်ပျူတာမှ ဖုန်းသို့ Data...
USB Flash Drive နဲ့ Memory SD Card တွေမှာဖြစ်တတ်...
Su Su TunFollowYesterday at 14:55 · Los Angeles, C...
May 10, 2016 Facebook Na...
မိမိ iPhone,iPad,iPod မှ Credit-card မတောင်းအောင် ...
eMMC DL Tool အသုံးပြုပြီး Qualcom chipset သုံးဖုန်...
ဖုန်း Screen သေးနေလို့ Game ကစားရတာ အားမလို အားမရ...
Install လုပ်ရုံနဲ့ အမြဲတမ်းသုံးလို့ရမဲ့ နောက်ဆုံးထ...
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android Application Icno (Logo)ေ...
Internal Memory အလွန်နည်းသောဖုန်းများအတွက် SD Card...
မြန်မာသံ လေးတွေ နာ:ထောင် ကြမယ်။ (သီချင်းများမတောင်...
Window 10 ကို Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Re-Loader ...
ဘယ်လိုမှ Activate လုပ်မရတဲ့ Window ကို Activatedြ...
Piranha Box Service ToolPiranha Box Service Tool V...
ကွန်ပျူတာမှ မှားဖျက်မိတာတွေကို ပြန်ယူနိုင်တဲ့ Remo...
Mtk Extractor 2.6.2Posted in Window PC သုံး Softwa...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Firmware တင်လိုက်ရတဲ့ အ...
LolliZwaper v1.2 (Android 5.0 နဲ့ အထက် Zawgyi Font...
G Five Firmware များ Download ရယူရန်Posted in Firm...
Windows 10 ကို မြန်မာစာမှန်အောင် Font & ကီးဘုတ် ထ...
Firmware တင်ရင် သိထားသင့်တာလေးတွေ......03 May Fi...
Samsung Marshmallow V 6.0.1 တွေမှာ (Zawgyi Font )...
Mobile ဖုန်းများမှ Messages (SMS) တွင် မြန်မာစာမေ...
Android တွင် Google Drive ကိုအသုံးပြုနည်း Saturday...
I-STYLE 710 Firmware တင်နည်း1:34:00 AM Android နည...
Huawei ဖုန်းမော်ဒယ် တွေမှန်သမျှ Firmware တွေ စိတ်ြ...
Lollipop 5.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများအတွက် မြန်မာထည့်ပေ...
♪ အင်တာနက် မရှိဘဲ Facebook ပေါ် ပို့စ်တင်မယ် ♫Tuesd...
Samsung Galaxy Note5Marshmallow 6.0.1 Root ဖေါက်...
Android Firmware Back Up ပြန်ဆွဲထုတ်နည်းAndroid Fi...
Firmware backup ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်သိမ်းထား ရေ...
https://www.facebook.com/yarzartun.tun.5. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.